Monday December 09, 2019 - 07:14:40 in Wararka by Super Admin
HABARGIDIR.INFO - Xoog maquunin , sheegasho magac qabiil aysan metelin. 1- Xubnahii Gollaha waxaa xoog ku qaatay Al-Ictisaam, Aala Sheekh, Damujadiid ,Tagfiir , Al Islaax , Saraakiil Burcad badeed. Waxey Laaluusheen oo aamusiyeen Dagaal oogayaal ho
HABARGIDIR.INFO - Xoog maquunin , sheegasho magac qabiil aysan metelin. 1- Xubnahii Gollaha waxaa xoog ku qaatay Al-Ictisaam, Aala Sheekh, Damujadiid ,Tagfiir , Al Islaax , Saraakiil Burcad badeed. Waxey Laaluusheen oo aamusiyeen Dagaal oogayaal hore oo Hotelo ku dhistay lacagteey siiyeen. Cadaalad malaga sugayaa mase metelaan Habargidir ? 2- Xasan Macalin Saciid oo Sacad Reer Nimcaale ah, iyo Xukun Nur Xasan Cadde oo Sacad Reer Maxamed ah ayaa isku feeray madashii shirweynahii Hobyo kadib markii Xasan Macalin Saciid ku dooday inuu kursiga Reer Maxamed siin doono Nin Al-Itixaad ah oo Reer Cabdi ah ama Prof Shirwac !Markii Xasan Macalin iyo Xukun Nur is feereen , waxaa laga adkaaday Xasan Macalin kadibna Xukun Nur waxaa lagu xiray Xabsiga Hobyo.